Candy Crush Soda Saga အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（85.3MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Candy Crush Soda Saga
Download Candy Crush Soda Saga ကိုယခုရယူပါ။
Legendery Crush Crush Sody Sody Soda Saga! ခရမ်းရောင်ဆိုဒါနှင့်ပျော်စရာများဖြင့်ထူးခြားသောသကြားလုံးများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများပိုမိုများပြားသောသကြားလုံးများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများပိုမိုများပြားလာသည်။
ဒီပါးစပ်ရေလောင်းခြင်းပဟေ and ိပက္ခစွန့်ခွာထွက်ပြေးဖို့ပျော်စရာအတွက်ရေငတ်နေလိမ့်မယ်။ Tiffi ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ကိုက်ညီခြင်းအားဖြင့် Tiffi ကိုရှာဖွေရန်နှင့်လိုက်လျောခြင်းအားဖြင့် Tiffi ကိုရှာဖွေရန် Tiffi ကိုရှာဖွေရန် Tiffi ကိုရှာဖွေရန် Tiffi သို့ Jimmy သို့ဆက်သွယ်ပါ။ ဒီ soadalious souga ကိုတစ်ယောက်တည်းယူပါ, ဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားပါ, ဒါမှမဟုတ်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ကိုဘယ်သူရနိုင်မှာလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါ။
လစဉ်ရာသီနောက်ဆုံးသတင်းများသည်သင်စူးစမ်းလေ့လာရန်ထူးခြားသောရှာဖွေမှုများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းများကိုယူဆောင်လာပါလိမ့်မည်။ သင်၏ Saga တွင်သင့်အားကူညီရန်ဆုများနှင့် boosters များကို0င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စဉ်ရာသီကုန်ဆုံးချိန်အထိတိုးတက်ရန်ရှာရန်အပြည့်အစုံ။
ဇာတ်လမ်းတွဲပြိုင်ပွဲတွင်သင်၏ယှဉ်ပြိုင်မှုဘက်မှာပြပါ။ အလျင်အမြန်အဆင့်အတန်းကိုအပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးအမြန်ဆုံးတိုးတက်လာနိုင်ကြောင်းကြည့်ရှုရန်အခြားကစားသမားများကိုယှဉ်ပြိုင်ပါ။ သို့မဟုတ်ကစားသမားများအလွန်ကောင်းသောဆုလာဘ်များအတွက်အတူတကွအလုပ်လုပ်သောကစားသမားအတူတကွအလုပ်လုပ်သောအတန်းဂိမ်း mode မှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါ။
Candy Crush Soda Saga ၏အင်္ဂါရပ်များ -
br> * ပါးစပ် - ရေလောင်းသောဂရပ်ဖစ်, 3D ဇာတ်ကောင်နှင့်အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်
လစဉ်ရာသီဥတုနှင့်အတူလစဉ်ရာသီဥတုနှင့်ပြည့်စုံသောရာသီဥတုများနှင့်ပြည့်စုံသောရာသီ, ပျော်စရာနှင့်ထူးခြားသောသကြားလုံးများနှင့်အတူ -
Soda - ခရမ်းရောင်ဆိုဒါကိုထုတ်လွှင့်ရန်နှင့်သကြားလုံးဝက်ဝံများကိုချွေတာရန်နှင့်သကြားလုံးသကြားလုံးများကိုကယ်တင်ရန်ပုလင်းများနှင့်သကြားလုံးများနှင့်ကိုက်ညီသောသကြားလုံးများကို scrow
frosty bears free
Honeycomb - Honeycomb - ဖုန်ထူထပ်သောသကြားလုံးဝက်ဝံများကိုထုတ်ပေးရန် Honeycomb-Match Match Candies
Jam - Jam ကိုဘုတ်အဖွဲ့သို့ဖြန့်ပါ။
ထူးခြားသောသကြားလုံးများနှင့် scrumption အသစ်ပေါင်းစပ်ခြင်းများ
ဆွီဒင်ငါးတစ်ချိန်တည်းတွင်စတုရန်း4လုံးပါသောသကြားလုံး4ခုနှင့်ကိုက်ညီပါ။
Matching7Candy အတွက်သကြားလုံး7သကြားလုံး။
TA အတွက်အသင်းသို့တက်ခြင်း40 င်ရောက်သည့်အရာ4ခုတွင် SCY ဆုများ
> Facebook Connects သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုစိန်ခေါ်နိုင်သည့်ခေါင်းဆောင်များနှင့်သင်၏ Highscores များကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်နှင့်သင်၏အမြင့်ဆုံးကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
Candy Crush Soda Soda Saga သည်လုံးဝကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်အပိုရွေ့လျားမှုသို့မဟုတ်ဘဝများကဲ့သို့သောဂိမ်းများတွင်အချို့သောဂိမ်းပစ္စည်းများသည်ငွေပေးချေမှုလိုအပ်လိမ့်မည်။
ဒီဂိမ်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သင်0န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသင်သဘောတူသည် ; http://about.king.com/consumer-tters/terms
ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်များကိုမရောင်းပါနှင့်။ သင်၏အချက်အလက်များကိုကြော်ငြာများဖြင့်ကြော်ငြာမိတ်ဖက်များဖြင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဝေငှသည်။ https://king.com/privacypolicy တွင်ပိုမိုလေ့လာပါ။ အကယ်. သင်၏အချက်အလက်အခွင့်အရေးများကိုသင်မရောင်းလိုပါကဂိမ်းအကူအညီစင်တာမှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ် https://soporto.king.com/ သို့ သွား. ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည် br>
နောက်ဆုံးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Soda Saga!
ဘာအသစ်လဲ Candy Crush Soda Saga 1.209.7
CANDY CRUSH SODA Saga Level 5349 to 5351 ★★★ || #CandyCrushSoda
Best game to killing times